ဝါးခယ်မ : မြောင်းမြ မြို. အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
​မြောင်းမြမြို့သည် အောက်မြန်မာပြည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်သော ခရိုင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် မအူပင်ခရိုင်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဖျာပုံခရိုင်၊ တောင်ဘက်တွင်လပွတ္တာခရိုင်၊ အနောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်ခရိုင်တို့ဖြင့် နယ်ခွဲခြားကာ သတ်မှတ်ထားသည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုခရိုင်သည်၂၈၃၅ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသည်။
မြို.ဦးစေတီ စင်္ကြာသီဟ စင်္ကြာနန္ဒ ( Photo by Myo Zaw )
ဇမ္ဗူဒီပ ဥတောင်းကျမ်းပါ စစ်တမ်းများတွင် ပန်းမဝတီမြစ် အရှေ့ဘက်ကို မြောင်းမြနယ်၊ အနောက်ကို ပုသိမ်နယ်ဟု မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တို့ သတ်မှတ်ကြောင်းဆိုသည်။ မြောင်းမြဟု ဆိုလျှင် မြောင်းမြစား လောက်ဖျားကို အမှတ်ရကြလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ မြောင်းမြစားလောက်ဖျားသည် ခရစ် ၁၃၁၇ ခုနှစ်၌ ထွန်းကားခဲ့သော မွန်လူမျိုးမြို့စားကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြောင်းမြမြို့ဟူ၍ သမိုင်းတွင် ထင်ရှားလာခဲ့ရသည်မှာ မြောင်းမြစားလောက်ဖျားက မွန်ဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ထင်ရှားလာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ခရစ် နှစ် ၁၄၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင်အင်းဝမှ မြန်မာစစ်သည်တို့သည် မြောင်းမြမြို့ကို လာရောက် တိုက်ခိုက်ဘူးသည်။ သို့ရာတွင် မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ထိုသမိုင်းဝင် မြောင်းမြမြို့မှာ ယခုမြောင်းမြမြို့နှင့် ၇ မိုင် ကွာ အနောက်တောင်ထောင့်အရပ် ရွှေဘုံသာတောင်ခြေရှိ ကရင် အမျိုးသားအများအပြား နေထိုင်ရာ မြို့ဟောင်း ခေါ်သည့် ရွာတန်းရှည်ကြီးပင် ဖြစ်၏။
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာစစ်ပွဲတွင် ကမ္မဒိုလမ်းဘတ် (ကိုမိုဒါလမ်းဗတ်) သည် ပုသိမ်မြို့ကို ချီတက် သိမ်းပိုက်ပြီးသည့်နောက်၌ မြောင်းမြအပါအဝင် ပုသိမ်နယ်တစ်ခုလုံး၌ ဗြိတိသျှ ဆန့်ကျင်ရေး တိုင်းရင်းသားတို့ ထကြွခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ခရိုင်ဝန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကပ္ပိတန်ဖိုက်သည် ထိုတော်လှန်ရေးသမားတို့ကို နှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် မြောင်းမြနယ်မှ လူများစုဖြစ်သော ကရင်အမျိုးသားတို့သည် ပထမဦးစွာ မြောင်းမြမြို့မှနေ၍ ထကြွတော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ ကပ္ပိတန်ဖိုက် ဦးစီးသော ဇီးနိုးဗီးယားနှင့် နင်းမဆစ်ခေါ် သင်္ဘောကလေး ၂ စင်းမှ သင်္ဘောသားအချို့နှင့် ကရင်အမျိုးသား အနည်းငယ်တို့က နှိမ်နင်းရသည်ဟု ဆိုသည်။ မြောင်းမြမြို့တွင် နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို မဒရပ် တိုင်းရင်းသား ခြေလျင်တပ်က တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ပစ်ကြောင်းနှင့်လည်း ဆိုသည်။
၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင် သုံးခွ (ယခုမအူပင်) ခရိုင်၏ အနောက်မြို့နယ်နှင့် ပုသိမ်ခရိုင်၏ အရှေ့မြို့နယ် ဒေသများကို ပူးပေါင်းကာ မြောင်းမြခရိုင်ဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုစဉ်က မြောင်းမြခရိုင်တွင် မြောင်းမြမြို့နယ်၊ သီးကွင်း(ယခုအိမ်မဲ) မြို့နယ်၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ်နှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းနယ်တို့ ပါဝင်သည်။ လပွတ္တာမြို့နယ်ကို ခရစ် ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်ကျော်မှသာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကန်ဘဲ့မြို့နယ်ကိုကား ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီ ၁ဝ နှစ်ကျော်ခန့်ကမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ကန်ဘဲ့မြို့နယ်ကို ပြန်လည် ဖျက်သိမ်း၍ လပွတ္တာမြို့နယ်ထဲသို့ ပြန်သွင်းသည်။ ယခုအခါ ကန်ဘဲ့မြို့နယ်ကို ပြန်လည် မထူထောင်သေးပေ။ သို့ရာတွင် ၁၉ဝ၃ ခုနှစ်၌ ဖျာပုံခရိုင်ကို တည်ထောင်လိုက်သောအခါတွင် နယ်နိမိတ် အပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်ရပြန်သည်။ ထိုစဉ်က မြောင်းမြခရိုင်၌ ပါဝင်ခဲ့သော ဝါးခယ်မနယ်ထဲမှ ပန်းတနော်မြို့နယ်ကို မအူပင်ခရိုင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းပေးလိုက်ရ၍ သုံးခွခရိုင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ပြင်ဒရယ်မြို့နယ်ကို မြောင်းမြခရိုင်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းလိုက်လေသည်။
အထက ၁ မြောင်းမြ ( Photo by Myo Zaw )
မြောင်းမြမြို့နယ်သည် မူလက ပုသိမ်ခရိုင်တွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က နယ်နိမိတ်မှာ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် ပြင်စလူ၊ ပြမလော၊ သက်ကယ်သောင်မြစ်ကြောများဖြင့် နယ်နိမိတ်သတ်သည်။ မြောက်ဖက်မှာ မြောင်းမြမြို့ ဖြစ်သည်။ ခလောက်ချုက် (ယခုခလောက်သိုက်) အထိ မြောင်းမြပိုင်ဖြစ်သည်။
မြောင်းမြမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃ဝ ခန့် အကွာတွင် ရခိုင်ရိုးမတောင်၏ အဆက်ဖြစ်သော အနည်းငယ်မြင့်သည့် တောင်ကလေးတစ်တောင်ရှိသည်။ ထိုတောင်မှ အပ မြောင်းမြခရိုင်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသပီပီ မြေနိမ့် မြေပြန့်ဒေသဖြစ်၍ ရေထ ခေါင်ရေတက်ရက်များတွင် ရေလွတ်ရုံမျှသာ ရေမျက်နှာပြင်ထက် မြင့်သည်။ ခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင် မြစ်ချောင်းများစွာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ ဟင်္သာတခရိုင်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်မှ ခွဲထွက်လာသော ပန်းမဝတီမြစ်သည် မြောင်းမြခရိုင်၏ အနောက်ဘက်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်း၍၊ ပြမလောမြစ်သည် ခရိုင်၏ အလယ်မှ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ပန်းမဝတီမြစ်တို့ကို ယှဉ်ပြိုင်လျက် ပင်လယ်ဘက်သို့ စီးဆင်းသည်။ ပင်လယ်သို့ စီးဝင်ခါနီးတွင် ပြမလောနှင့် ပြင်စာလူဟူ၍ မြစ် ၂ ခုခွဲထွက်ကာ ပင်လယ်တွင်းသို့စီးဝင်သွားသည်။ ရွှေလောင်းမြစ်မှာလည်း ခရိုင်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်မကြီးမှ ခွဲထွက်လာသော မြစ်တစ်မြစ်ဖြစ်၍၊ ပင်လယ်မှ ၂၄ မိုင် အကွာတွင် ဧရာဝတီမြစ်၏ အခြားမြစ်ခွဲတစ်ခုနှင့် ပေါင်း၍ ကျွန်းပြဿဒ်မြစ်ဟူသော အမည်ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ပြန်လည် စီးဝင်သည်။ ထိုမြစ်များအပြင် အခြား မြစ်ငယ်ချောင်းငယ် အများအပြားလည်း ရှိသေးသည်။ ထိုမြစ်ချောင်းများသည် များသောအားဖြင့် ကူးသန်းသွားလာရာတွင် အသုံးဝင်သည်။ ခရိုင်တွင်း ခရိုင်အပ ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ရေကြောင်းလမ်းများကိုသာအားထားရသည်။
မြောင်းမြ ကြိုးတံတား ( Photo by Myo Zaw )
မြောင်းမြခရိုင်တွင် ရာသီဥတုမှာ မိုးရာသီတွင် မိုးကောင်း၍၊ စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းသည်။ နွရောသီတွင် ပင်လယ်လေရသဖြင့် အတန်ငယ် အပူသက်သာသည်။ တစ်နှစ်လုံး၏ ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်သည် ၁ဝ၃. ၇၈ လက်မ ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှ အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်သည်၆၅ံဒီဂရီရှိ၍၊ အမြင့်ဆုံး အပူချိန်သည် ၉၅ံဒီဂရီ ဖြစ်သည်။ မြောင်းမြခရိုင်သည် မိုးကောင်း၍ မြေနုကျွန်းပေါ် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့်ပြင်၊ မြေဩဇာ ထက်သန်သောကြောင့် ထိုခရိုင်အတွင်း၌ စပါးကို အမြောက်အမြားစိုက်ပျိုးကြသည်။ စပါးစိုက်ဧကပေါင်းမှာ ၆၄၁,၁၄ဝ ဖြစ်သည်။
မြောင်းမြမြို.၏ နံနက်ခင်းတစ်ခု ( Photo by Myo Zaw )
မြောင်းမြခရိုင်တွင်းရှိ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၇၈၀,၅၇၆ ယောက် ဖြစ်သည်။ လူဦးရေအများစုမှာ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒီ မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်၍ ဒုတိယအများဆုံးမှာ ကရင်အမျိုးသားများ ဖြစ်သည်။
ခရိုင်အတွင်းရှိ တောင်ဘက် ပင်လယ်ပိုင်းကျသော ဒေသများတွင် လမု၊ လမဲ့၊ ကနစိုစသည့် ထင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော ထင်းတောများရှိသည်။ မြောင်းမြခရိုင်၏ ထွက်ကုန်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်မှာ ထင်းဖြစ်သည်။ ထိုခရိုင်၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာလည်း ဆန်စပါးလုပ်ငန်းပင် ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါးအထွက်ဆုံး ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုပြင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မြစ်ချောင်းတို့၏ ကမ်းဘေးများတွင် ဓနိပင်များ ပေါက်ရောက်သောကြောင့် ဓနိလုပ်ငန်းကိုပါ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆန်စပါးနှင့် ဓနိလုပ်ငန်းများအပြင် ခြံဥယျာဉ် များကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ငှက်ပျောခြံများကို လုပ်ကိုင်ကြ၍၊ အုန်းသီးများလည်း အတော်များများ ထွက်သည်။ ထိုပြင် ယခုအခါတွင် ခရိုင်အတွင်း၌ ဂုံလျှော်များစိုက်ပျိုး၍ အထူးအောင်မြင်လျက် ရှိသည်။
အခြား အရေးပါသော လုပ်ငန်းများမှာ ပင်လယ်ကမ်းနားဒေသ ဖြစ်သည့်အလျောက် ဆားနှင့် ငပိ ငါးခြောက်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူသိနည်းသော လုပ်ငန်းအများပင် ရှိသေးသည်။ ယင်းတို့အနက် တစ်ခုသောလုပ်ငန်းမှာ မြောင်းမြမြို့နယ် ထုံးဘိုကျေးရွာနယ်မြေမှ ထုံးဖုတ်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြောင်းမြမြို့နယ်ရှိ မြေစေးနီသည် စဉ့်အိုးဖုတ်ရန်အတွက် အလွန်ကောင်းသဖြင့် ရှေးအခါက စဉ့်အိုးများကို ဖုတ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် စဉ့်မသုတ်သော စဉ့်အိုးမှာ ရှေးကများစွာ ကျော်ကြားခဲ့၏။ ရှေးမွန်မြန်မာမင်းတို့ လက်ထက်က မြောင်းမြမြို့နယ်တွင် စဉ့်အုတ်ကြွပ် များကိုပင် ဖုတ်လေ့ရှိသည်ဟု ဆိုလေသည်။ မြောင်းမြခရိုင်အတွင်းရှိ လပွတ္တာမြို့တွင် ငပိလုပ်ငန်းနှင့် ဆားလုပ်ငန်းတို့ကို အကြီးအကျယ် လုပ်ကိုင်ကြ သည်။ ထိုခရိုင်အတွင်း အိမ်မဲမြို့အနီးတွင် မြေအိုး မြေခွက်များကို ပြုလုပ်ကြသည်။ မြောင်းမြခရိုင်၌ လမ်းခင်းရန် ဂဝံကျောက်များကိုလည်း တူးဖော်ရရှိကြသည်။ မြောင်းမြခရိုင်အတွင်း၌ ဆန်စပါး အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ကြီးကျယ်သော ဆည်များ တူးမြောင်းများဟူ၍ကား မရှိချေ။ ဝါးခယ်မမြို့နယ်အတွင်း မြောက်ဖက် အစွန်း၌ ၁၂ ၁/၂ မိုင်ရှည်လျားသော ရွှေလောင်းရေကာတာ တစ်ခုသာရှိ၍ ထိုတာကြီးက လယ်ဧကပေါင်း ၇,ဝဝဝ ခန့်ကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဘေးမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
( Photo by Myo Zaw )
မြောင်းမြခရိုင်တွင်းရှိ မြို့နယ်များနှင့် မြို့များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 4:03 PM